CNLD Biaken 10 Chin miphun damkawhnak Lam – Zion Tlang Media
CNLD Biaken 10 Chin miphun damkawhnak Lam
Pakhatnak, Chin miphun pumkhatnak thupibik ah ret ringring ding. ၁-ချင်:အမျိုးသား တရပ်လုံးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ဦးထိပ်ထား ဆောင် ရွက်မည်။ Chin nunphung, anka le calai, danledun, phunhnam sinak mizia, hnamdan ih tuahmi kut (puai), hnam thuamhnaw, hnam Ni sunglawi tipawl hloral men lo dingin kilkhawi ih nunter ringring. ၂- ချင်းအမျိုးသားတို့၏ ရိုးရာယာဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာများ၊ ရိုးရာပွဲလမ်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဝတ်စား ဆင်ယဉ်မှုများနှင့် နေ့ထူးနေ့မြတ်များ စသည်တို့ကို တည်တံ့ရှင်သန်ရေးအတွက်၊ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မည်။ Chin pupa dan vekih neih mi leiram (pupa ro leiram) thu ah, leiram neitu inapupa ro leiram hloh ih sung lo dingin dan felfai tuah ih kilhim. ၃။​ချင်းရိုးရာယဥ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဥ်အလာအရ ပိုင်ဆိုင်မြေ(ဘိုးဘွားပိုင် မြေ)နှင့်ပတ်သက်၍ အကျိုးခံစားခွင့် များကို ဥပ‌ဒေပြဌာန်းပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မည်။ Cozah hnaṭuan phunphun le bulpak dinmi hnaṭuan ah, Chin mino pawlin anmah le an phu tawk hna ngah thei dingin lamzin hawlsak ih bawm. (Cozah hnatuan dil tikah, nawhthuh paisa pek kham ding). ၄။​အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ချင်းအမျိုးသားလူငယ်လူရွယ်များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေးကို စီမံဆောင်ရွက် မည်။
5, Chin numi dinhmun cawisang in an nuhrin canvo ngah thei dingah thlun ding dan felfai tuah.
၅။​ချင်းအမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့်ရပိုင်ခွင့်များကို ဥပဒေပြဌာန်းပြီး မြှင့် တင်ဆောင်ရွက်မည်။ 6️⃣Thleidan le duhsak mi cuang nei lo, nawhthuh le eithup um lo Chinram Cozah thianghlim suak thei dingin zuam. ၆။​ဘက်လိုက်မှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းရှင်းသည့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ ဖြစ်ရေးအတွက် ထိန်းကျောင်းကြပ်မတ်မည်။ 7,Chinram sung lamzin le sumdawnnak ah khawpi khawte nuam tlang thluh thei dingin ṭuan ding. Cutin ṭuan tikah kiangkap thingkung le leiram siatter lo dingin kilhim ding. ၇။​ချင်းပြည်နယ်အတွင်း လမ်းပန်း ဆက် သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ မြို့ရွာစည်ပင် သာယာရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး သောနည်းလမ်းဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်။
8. Miphun duhnak lungthin kaitho ih cakter sinsin dingah, Mipi duhdan rawn phahin hnam hla le hnam thantar tuah. ၈။​ချင်းအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ရှင်သန်နိုးကြားစေမည့် ချင်းအမျိုးသားသီချင်း၊ ချင်းအမျိုးသားအလံကို ချင်းပြည်သူများ၏ သဘောထားနှင့်အညီ ဖော်ထုတ် သတ်မှတ်နိုင်ရေး စီစဥ် ဆောင်ရွက်မည်။ 9️⃣Chinram lenglam ih um Chinmi in, dan tuah mi le politics ruangih an ngah thei mi covo le an nuntu khawsakdan hrangih ṭulmipawl cu an umnak thuneitupawl thawn rawnaw in bawm ding. ၉။​ချင်းပြည်နယ်ပြင်ပနေ ချင်းတိုင်းရင်းသားများ၏ ဥပဒေအရရပိုင်ခွင့်များ၊ နိုင်ငံရေးအရရပိုင်ခွင့်များ အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်ရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးများကို တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် မည်။ 🔟 Miphunpawl karlak ih bangrep nun, mahte thuneihnak le Federal Democracy Rampi dinsuah ding thu ah, Tlangmi dang thawn kut kaiawin ṭuan tlang. ၁၀။​အမျိုးသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး အတွက် အခြားတိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်။ Catialtu Pu No Than Kap.
Previous Post:Thawng Za Tawng: Hakha Hmun Thar Kong Ka Lungum
Next Post:Model Thin Thin le Actor Wai Lu Kyaw Tazacuainak Tette Kong A Fiang Cang